Barnaamijyada ugu fiican ee wax laga beddelo sawirrada: beddelka sawiradaada | Abuurista khadka tooska ah
Maanta weedha ah "sawirku wuxuu u qalmaa kun eray" waa wax adduunka oo dhan ka jira. Hadda waxaan mudnaanta siinayna wixii aan aragno waxa aan akhrinayno; shabakadaha bulshada ayaa loogu talagalay taas, taasna waa, fiidiyowyada iyo sawirradu hadda way socdaan. Sidaas, Lahaanshaha barnaamijyo lagu tafatiro sawirrada waa wax aan ka maqnayn kombiyuutar, tabbiil ama xitaa taleefannada gacanta.
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu kaamil noqdo sawirrada, tanna kama waaban inuu dib ugu celiyo sawirrada, mararka qaarkoodna wuxuu helayaa natiijo aan u ekaanayn waxa runti dhab ahaan u jirta. Laakiin sawirku waa waxa hadda lagu xisaabtamayo. Sidaa darteed, waxaan eegeynaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee wax looga beddeli karo sawirrada, kuwa lacag bixinta ah iyo kuwa bilaashka ah, si aad u hesho xulashooyin aad saacado ku qaadato inaad ku horumariso sawirradaada.
1 Barnaamijyo si loo tafatiro sawirrada
1.3 Rinjiyeynta Pro
1.5 Sawirka lagu daray 6
1.6 Barnaamijka tafatirka sawir ee ugufiican: Canva
1.8 Barnaamijka Tifatirka Sawirka ee ugufiican: Snapseed
1.9 Dib u celi
1.10 Barnaamijka Tifaftirka Sawirka ugu Fiican: Adobe Photoshop Express
Barnaamijyo si loo tafatiro sawirrada
Cilmiga kombuyuutarka waa maaddo uusan qof walbaa heerkiisa heer sare dhigin. Waxaa jira kuwa si fiican iskaga difaaca barnaamijyada qaar marka loo eego kuwa kale, kuwaas oo jecel inay marwalba iskudayaan waxyaabo cusub, ama doorbida barnaamijyada internetka ama websaydhada inay wax ka beddelaan sawirrada.
Sidaa darteed, halkan waxaan ku siineynaa a xulashada barnaamijyada tafatirka sawir ee aad haysato oo aad dooran karto inaad adeegsato, ama ugu yaraan isku day. Keebaad hayn doontaa?
Waan ka xunnahay, laakiin waa inaan ku bilownaa barnaamij kan ugu badan adduunka looga isticmaalo tifaftireyaal badan oo sawir leh, xirfadlayaal iyo isticmaale labadaba. Isagu ma yahay xiddig barnaamijka si aad wax uga beddesho sawirrada intaas oo keliyana ma sameyso, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameysid sawirro, sawirro, dib u hagaajiso, beddesho midabada, sooyaalka, tirtirto, ku darto iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxay u oggolaaneysaa la shaqeynta qaabab badan oo muuqaal ah, ma ahan oo keliya kuwa ugu caansan, iyo sidoo kale lakabyo kala duwan, sidaa darteed waxa aad ku sameyso mid ka mid ah ayaa ka muuqan kara, ama maya, natiijada ugu dambeysa. Dhibaatada kaliya ayaa ah inay tahay barnaamij lacag la bixiyo.
GIMP waa waxa ay ugu yeeraan "bedelka ugu dhow ee Photoshop." Waana inay aad isugu egtahay oo ay xirfad ahaan la mid tahay ta kale (qaarna xitaa waxay dhahaan way fiican tahay). Si kastaba ha noqotee, way adagtahay in la isticmaalo, mana sahlana in wax la barto, sida ku dhacda Photoshop. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad isticmaashaa casharro badan oo fiidiyow ah si aad wax uga barato isla barnaamijka kale.
Sida astaamaheeda, waxaad u sameyn kartaa isla sida Photoshop, laakiin bilaash, maxaa yeelay waa barnaamij aad kala soo bixi karto Windows, Mac ama Linux dhib la'aan.
Kuwa Rinjiga adeegsadaa hubaal way xusuusan doonaan barnaamijka maalmihiisa hore. Way fiicneyd in la sameeyo waxyaabaha aasaasiga ah, oo ay ku jiraan tafatirka sawirku; laakiin wax badan ma weydiisan kartid. Si kastaba ha noqotee, way ka baxday Windows si ay u tagto wadadeeda gaarka ah. Sidaas awgeed, waxaan haysannaa Rinji Shop Pro, a Ka beddel barnaamijyada tafatirka sawir ee laga yaabo inay ku habboon yihiin dadka leh aqoonta celceliska ama xirfadleyda.
Waxaa laga heli karaa oo keliya Windows-ka waxayna leedahay wax aysan dadka kale haysan, sida HDR ama wajiga aqoonsi.
Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirada ee la tartama Photoshop iyo GIMP waa kan. Xaqiiqdii, marka loo eego abuurayaasheeda, waxay u timid inay bedesho barnaamijyada lacag bixinta iyadoo la siinayo dhammaan astaamahooda.
Barnaamijku wuxuu inta badan ku saleysan yahay daaweynta sawirrada, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dib-u-hagaajinta.
Sawirka lagu daray 6
Haddii aadan si aad ah ugu adeegsan barnaamijyada wax ka beddelka sawirka, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn barnaamij weyn oo aad ku sameyso saddex ama afar shay sawirradaada. Sidaa darteed, waxaan u soconaa kugula talin tifaftiraha sawirkan, fiican maxaa yeelay waxay leedahay menu aasaasi ah oo fudud, way fududahay in la isticmaalo oo in kastoo aan lala barbar dhigi karin barnaamijyada ugu horreeya, runta ayaa ah inay leedahay shaqooyin ka xirfad badan, sida isku darka sawirrada HDR, isticmaalka lakabyada, miirayaasha, saamaynta, iwm.
Barnaamijka tafatirka sawir ee ugufiican: Canva
Haddii aad uga sii badan tahay adeegsiga barnaamijyada si aad sawir uga samayso khadka tooska ah, ama sababta oo ah sawirada aad dib u soo celisay waxaa laga soo qaatay bangiyada sawirka ama sababtoo ah ma doonaysid inaad wax ku rakibtid kombuyuutarkaaga, Canva waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican.
Este barnaamijku wuxuu ka shaqeeyaa internetka wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad wax walba ku sameyso sawirro: hagaaji dhalaalka, dalagga, wareeji ama rogrog, dabool shaandhooyinka, ku dar astaamaha ...
Hadda, waxaad haysaa waxqabadyo ama sawirro iyo arrimo ku habboon oo la bixiyo. Laakiin waxaa jira kuwo badan oo bilaash ah waxayna leedahay bangi u gaar ah oo leh kumanaan iyaga ka mid ah, iyo sidoo kale qaabab horay loo qaabeeyey oo loogu talagalay adeegsiyo badan.
Mid kale oo la tartamaya Canva waa kan, Pixlr, oo lagu garto inuu leeyahay istiikarro badan, xarfo, shaandhooyin, waxyeellooyin ... Waxa ugu fiican waa inay lacag la’aan tahay oo aad dooran kartaa tafatirayaal kala duwan, iyadoo lagu saleynayo inaad u baahan tahay qalab xirfad badan ama ka yar .
Sidoo kale, xagga tafatirka, waa mid wax ku ool ah oo daboolaya baahiyaha badan ee aad ubaahnaan doonto: hagaaji dhalaalka, dalagga, masax asalka, ku dar shaandhooyinka, iwm.
Barnaamijka Tifatirka Sawirka ee ugufiican: Snapseed
Aynu hadda ka hadalno codsi ku saabsan moobilkaaga ama kiniinigaaga. Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirada ee la soo dejiyey lana isticmaalay, maadaama ay si caqli gal ah u shaqeyneyso isla markaana dhaqdhaqaaqyo yar oo fartaada ah waxaad ku guuleysan doontaa natiijada aad filayso.
Markaad u baahato xawaare, isagaa daryeeli doona si otomaatig ah u hagaaji wax walba sawirka ugu habboon ilbiriqsiyo, oo xitaa waxay ku siineysaa shaandhooyin iyo saameyn si aad u xoojiso sawiradaada, iyo sidoo kale loox si aad u xoojiso saameynta ugu dambeysa. Iyo tan ugu fiican, waa bilaash.
Codsigan loogu talagalay Android iyo macruufka ayaa ah mid aad u wanaagsan sababtoo ah buugga weyn ee miirayaasha ee ay leedahay. Iyo, ilbiriqsiyo gudahood, sawir kasta oo aad ku shaqeysid abka waxaa looga tagi karaa taabasho farshaxan oo umuuqan doona xirfadle.
Sidoo kale Waad goosan kartaa, wax ka beddeli kartaa qiimaha sawirka, ku dar burush ama burush, iyo sidoo kale miirayaal iyo habab kala duwan.
Barnaamijka Tifaftirka Sawirka ugu Fiican: Adobe Photoshop Express
Si ka duwan Adobe Photoshop, Barnaamijkan waxaa kaliya laga heli karaa macruufka, waa lacag la'aan, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad haysato mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirada oo leh shaqooyin aasaasi ah iyo kuwo xirfad leh, iyo waliba miirayaal iyo shaqooyin kale oo aad wax badan u isticmaali doontid markaad tijaabiso.
Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan barnaamijkan ayaa ah inuu ku kooban yahay kaliya dadka isticmaala Apple, maadaama aan loo heli karin Android (ama Windows).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Barnaamijyada ugu fiican ee wax laga beddelo sawirrada